Broadway Musicals - Otu n'ime ihe a ga-eme na New York | Akụkọ Njem
Ihe emere na New York: Gaa na egwu Broadway
Susana godoy | | Oge ntụrụndụ
New York bụ otu n'ime ebe ndị nwere ọtụtụ njem nleta. Ọ bụ ya mere enwere ọtụtụ nhọrọ anyị ga - achọ ụbọchị ole na ole iji mezuo ha. N'ime ha niile, taa, anyị ga-anọnyere otu n'ime ndị otu na-atụ aro ya niile: Broadway egwu.
O doro anya na ị nụla ya ma ọ bụ ma eleghị anya, ị nụlarị. Mana otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, ọ bụ otu n'ime ihe ndị kachasị mkpa na New York. Otu n’ime oge ahụ agaghị echefu echefu nke a ga-edekọ n’azụ anyị. Anyị ga-anụ ụtọ ụzo a Times Square, iji mechaa gaa n'egwuregwu ụfọdụ n'ụdị egwu ma ọ bụ opera.
1 A ije site na Broadway na Times Square
2 Kedu ihe kpatara egwu Broadway ji bụrụ ahụmịhe ga-ahụrịrị?
3 Egwú egwu kachasị mkpa anyị ga-achọta
A ije site na Broadway na Times Square
Dịka anyị kwurula, Broadway bụ ụzọ na-agafe otu n'ime ama ama ama na ebe ahụ: Times Square. Akụkụ mbụ site na Halllọ Nzukọ Obodo na Bronx. Yabụ n'okporo ụzọ ya, ọ hapụrụ ọtụtụ okporo ụzọ yana ọtụtụ ụzọ. Mana ọ bụ eziokwu na n’ime ha niile, Times Square bụ otu n’ime ihe kachasị mkpa. Ọfọn, n'ihi na ọ bụ mpaghara ebe ọtụtụ nhọrọ ntụrụndụ na-agbado, yana ihe karịrị ebe nkiri 40 anyị ga-enwe gburugburu anyị. Ebe a na-arụsi ọrụ ike mgbe niile, mana ọ bara uru ịchọpụta.
Na square ahụ, anyị ga-ahụ ka ọkụ na ihe ịrịba ama si ejide anyị. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ịchọpụta mpaghara ahụ ntakịrị, tupu ị banye n’ime ihe ngosi, ị nwere ike ime ya ebe ị maara ụlọ ihe nkiri niile enwere n'etiti 6th Avenue na 8th Avenue. Site na mpaghara a ị nwere ike ịnweta ụfọdụ ụlọ ihe nkiri kachasị mkpa, n'etiti nke anyị nwere ike ịkọwa ma 'Igwe' ma 'Imperial'.
Kedu ihe kpatara egwu Broadway ji bụrụ ahụmịhe ga-ahụrịrị?
Mgbe ọ bụla anyị gara otu ebe, anyị na-ahapụ onwe anyị site na omenaala ya na nhọrọ ndị njem na-enye anyị. Na nke a, anyị enweghị ike ịbelata. Ebe ọ bụ na Broadway musicals bụ akụkụ nke mpaghara a, ọdịbendị ya na akụkọ ihe mere eme ya. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị ahụ na-egosi na ị ga-ebi otu oge na ndụ gị, opekata mpe. Ebe ọ bụ na ọ bụ ihe na-enye ọgaranya na ihe pụrụ iche, na-enweghị mgbagha. Na mgbakwunye, ọtụtụ aha ama ama na ihu nke ụwa a emeela ụfọdụ egwuregwu ebe a. Na-aga n'ihu, nke Groucho Marx, Audrey Hepburn ma ọ bụ Robert Redford nye James Dean, Marlo Brando ma ọ bụ Grace Kelly n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ.
Egwú egwu kachasị mkpa anyị ga-achọta
Ọ bụ eziokwu na ha nwere ike ịdị iche iche na ezinụlọ niile. Mgbe ụfọdụ ha na-agbanwe, mana enwere ụfọdụ nke karịrị mkpa. N'ezie, ndị kachasị ewu ewu bụ 'Eze ọdụm', 'Chicago' ma ọ bụ 'Phantom nke Opera'. Mana echefughi aha ndi ozo dika ‘Ajọ’, ‘Les Miserables’, ‘Mma na anụ ọhịa’ ma ọ bụ ‘Mamma Mía’. Mgbe 'Aladdin' ma ọ bụ 'Oyi kpọnwụrụ', ha bụkwa ndị ọzọ a ma ama. O yiri ka ndị Disney-themed ndị bụ mgbe niile bụ ndị na-ewere ọnọdụ dị elu. Ma ị masịrị aha ndị a akpọrọ aha, ma ọ bụ ndị ọzọ ị nwere ike ịchọta na bọọdụ ahụ, ọ kachasị mma ịnweta tiketi tupu oge dị ka ibe Ndekọ ahịa, na ebe nrụọrụ weebụ na Spanish, ebe ị nwere ike ịzụta na euro na ọrụ ndị ahịa mpaghara. Ọtụtụ n'ime ọrụ ndị a na-eresị izu tupu mgbe ahụ, yabụ anyị na-akwado ịghara ịzụrụ ha n'ụlọ ọrụ igbe
Ọ bụ eziokwu na anyị anaghị echeta oge niile ma ọ bụ maka na ọ bụ mkpebi nke oge ikpeazụ, na anyị enweghị tiketi. Echegbula onwe gị, n'ihi na otu oge 'in situ', ị nwekwara ike ịzụta ha. Ọ bụrụ naanị na ị chọrọ ịga ihe ngosi, mana ị nweghị nhọrọ maka onye ọ bụla ọkachasị, enwere Squarelọ ahịa Times Square nwere ahịa tiketi na ezigbo ego, ebe ha abughi oche di nso na ogbo. Mana dị ka anyị na-ekwu, ọ bụ mgbe nhọrọ ịtụle. N'aka nke ọzọ, n'otu ụlọ ihe nkiri ahụ ha ga-enwekwa tiketi, n'otu ụbọchị a na-eme ihe mbụ n'ụtụtụ, ha na-enye ego maka onye mbụ na-abata.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Oge ntụrụndụ » Ihe emere na New York: Gaa na egwu Broadway